Kuyahlolwa: Umculo onesitayela | Kusuka kuLinux
Kuyaqondakala: Umculo onesitayela
Abongile | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sawubona ngikulethela lokhu okuthunyelwe okubonisa izici ezijwayelekile ze Ukucwaninga. Isidlali somculo esiphelele futhi esinezindlela eziningi ezinokuxhumana okubili okutholakalayo nemiphumela eminingi. Saqala!
2.1 Isixhumi esibonakalayo seWinamp
2.2 Isixhumi esibonakalayo se-GTK
I-Audacious iyatholakala ezinqolobaneni ze- Ubuntu:
Futhi kulabo Fedora:
Kulezo ze- Arch:
Futhi ku I-Gentoo:
Ha besizolungela i-Audacious yethu!
Ku-terminal (console, Shell, bash) run:
Futhi kuzovula into enjengale:
Uhlelo luhlukaniswe izixhumi ezi-2 zokuqhafaza, iWinamp ne-GTK.
Isixhumi esibonakalayo seWinamp
I-interface ye-Winamp yisixhumi esibonakalayo se-Audacious default. Ukwengeza umculo ohlwini lwadlalwayo, chofoza isithonjana:
Kuzovula into enjengale:
Sikhetha ingoma bese izoqala ukudlala.
Isixhumi esibonakalayo se-GTK
Angisithandi neze isikhombimsebenzisi seGTK, kuyabanda kakhulu kodwa kuyinhlanhla ukuthi basinike ithuba lokuyisebenzisa. Ake siqale!
Okokuqala kuzofanele sichofoze ku:
Eduze kwe-View, Interface bese sikhetha i-GTK eyodwa bese kuvela into enjengale:
Futhi-ke izophinda ikhiqizwe, ngiyethemba uyithandile.
Uma ufuna ukuchitha amahora ama-2 ubheke i-monitor ngomculo wangemuva, iya ku-View, Visualizations bese uchofoza kulowo owufunayo. Amahora ama-2 aqinisekisiwe!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Kuyaqondakala: Umculo onesitayela
Angikaze ngiyithande i-WinAmp, ngisho ne-AIMP, lapho ngisebenzisa i-linux bengihlala ngisebenzisa i-kde kusuka ku-knoppix 2.3 nge-kde 2.1, ngakho-ke uma ingalethi isikhombimsebenzisi se-qt ayisebenzeli mina, enye into ukuthi inqobo nje uma umngane wami uClementine ekhona Akudingeki ngibheke kolunye uhlangothi
Ngiyisebenzisa njengoba ngifudukela ku-debian, esikhundleni se-aimp futhi ngombono wami ilula futhi iyasebenza. Ukuphela kwento engingayithanda ukuthi uma ungasebenzisa ama-winamp plugins kepha hheyi awukwazi ukucela yonke into empilweni ...
I-PS: Kungani ngingatholi iDebian ene-chormium uma i-ejenti yomsebenzisi ikulungiselele?
inkululeko ye-gnulinux kusho
Benginethemba lokuthi okuthunyelwe kube ngesikhumba esithile esizosenza singathuseli kangako i-xd
Kepha lokho sekuvele kungokwakho, empeleni ungabeka izikhumba zeWinamp ku-Audacious.
Ukukhononda ngakho kufana nokucela incwadi enemibala ukuthi ize ngombala.
Izikhumba ze-Winamp nazo ziyesabeka, ngifuna okuthile okuswidi wamehlo, okunikeza isitayela se-itunes, noma isibonelo izikhumba ezithile ezinjengalezi:
Ngiyaphinda ngithi, lokho kungokwami, kuzikhumba ze-winamp, kukhona ama-iTunes clones, uma ngabe yilokho okuthandayo, futhi uma kungenjalo ungazenzela ngokwakho, iFoobar2000 SDK inelayisense le-BSD, bekungeke kube nzima noma kungabi semthethweni, ukukopisha isikhumba osithandayo.
Anginalo ulwazi, namandla, noma isikhathi sokuzenzela i-LOL
Ngangivame ukusebenzisa isikhumba esilingisa isikhombimsebenzisi se-iTunes, kepha njengoba ngabona ukuthi sasinzima kakhulu, ngakhetha ukusebenzisa i-iTunes kunaleso sikhumba.
Into enhle i-Audacious ne-VLC zingcono.
Kuhle kakhulu, kepha ithiphu ...
Nakekela izithombe-skrini zabafundisi, imicibisholo ethe xaxa ...
Akunzima ukuwahlela nge-Gimp (ngokwesibonelo) bese ungeza eminye imicibisholo noma amabhokisi ahloniphekile ...
Ngizokugcina engqondweni. Ngiyabonga 😉
Enye indlela ukusebenzisa iShutter. Kuyisikrini esihle, esikwazi ukuhlela isithombe ngendlela elula, kufaka phakathi umcibisholo obonakalayo. 😉
isidlali esihle kakhulu, sisebenzisa inkumbulo encane, sisebenzisa izikhumba ze-winamp, sisekela ama-plugins futhi sinenguqulo ye-gtk. ukugxeka kwami ​​okungathi sína kuphela ukuthi kushoda ezinye izici ezitholakala ku-winamp yangempela.
Kimi okungenani, isidlali somsindo esihle kakhulu kwiLinux. Okulula nokuhlinzwa emisebenzini yayo.
Ngiyazi ukuthi ungumakadebona womdlali, kepha nginyakaze kuphela ne-Amarok ku-KDE, yize manje senginoClementine neVLC ku-gtk.
«Okuhamba phambili» ,, Akukaze kwehluleke ,,,, njengamanje kuzwakala kugcwele
UClementine ne-Android rulz! 😀
IGrande Audacious!, Ngake ngasebenzisa ama-xmms phambilini kepha ngiyathutha hehehe ake sibone ukuthi kuhamba kanjani, okuthunyelwe okuhle kakhulu!
Iqiniso ukuthi lo ngumdlali wami engimthandayo ngemuva kokuthi uClementine enakho konke okudingayo
Punch F kusho
Nge-Audacious ngikwazile ukuthola umsindo omuhle kakhulu kude.
Phendula ku-Puncheta F
Ngaphandle kokucindezela okubi kwe-interface ye-GTK, ngikuthola kusebenza kakhulu. Ngiyisebenzisela ukudlala umculo emicimbini nasemicimbini. Ikhono lokusebenza nohlu oluningi ngasikhathi sinye futhi uhambise amathrekhi kusuka kolunye uhlu uye kolunye kubonakala kuwusizo kimi. Futhi, iqiniso lokuthi lolu wuhlelo oluyisisekelo lukwenza kukhanye futhi kusheshe.
Ungayithumela kanjani imiyalo / izinqubo ngemuva
Ungayilalela kanjani i-Internet radio (Tunein) usebenzisa i-VLC